ကျိုတိုရှိ အကျော်ကြားဆုံး ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများမှာ Fushimi Inari Shrine Shrine၊ Kinkakuji Temple နှင့် Kiyomizudera Temple တို့ဖြစ်သည်။ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းသည် ကျိုတိုမြို့၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ တောင်စောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး အမြင့် 18 မီတာရှိသော ပင်မခန်းမကြီးမှ မြင်ကွင်းသည် အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းသို့ virtual ခရီးတစ်ခုသွားကြပါစို့။ ကျိုတိုရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း ဓာတ်ပုံများ Kyoto ရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto ရှိ Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = Kyoto Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = Shutterstock Kiyomizudera Temple Kyoto ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = Kyoto ရှိ Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း၏ Shutterstock မြေပုံ [map address="Kiyomizudera Temple" width="100%" height="353px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3pcret4" class-tEN border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true"] အဆုံးထိ ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သို့ "Best of Kyoto"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kodaiji ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Nanzenji ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ရှိ Rurikoin ဘုရားကျောင်း၏ပုံရိပ်များ - တိုတိုကုဂျီဘုရားကျောင်းရှိဆောင်း ဦး ရာသီအရောင်များ, ကျိုတိုဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ဒိုင်တိုကူဂျီဘုရားကျောင်း - သဘာဝတရားနှင့်သဘာဝတရားနှင့်သဟဇာတရှိဇင်ကမ္ဘာ။ အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ - Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji စသည်တို့။ ဓာတ်ပုံများ - Eikando Zenrin-ji ဘုရားကျောင်း - အလှဆုံးဆောင်း ဦး ရာသီအရောင်များရှိသောဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - Kyoto Imoshial Palace (Kyoto Gosho) ဓါတ်ပုံများ - နွေရာသီတွင်ရိုးရာကျိုတိုရိုးရာဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ချယ်ရီပန်းပွင့်များ ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kamogawa မြစ်ဓါတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ဆောင်း ဦး ရာသီ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နှင်းတွေကျနေတဲ့ ရွာတွေရဲ့ ရှုခင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာ Shirakawa-go၊ Gokayama၊ Miyama နှင့် Ouchi-juku တို့၏ပုံများဖြစ်သည်။ တစ်နေ့နေ့တွင် ဤရွာများတွင် သန့်ရှင်းသောကမ္ဘာကို သင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နှင်းဖုံးရွာများ Shirakawago (Gifu စီရင်စု) Shirakawago၊ Gifu စီရင်စု Shirakawago၊ Gifu စီရင်စု Shirakawago၊ Gifu စီရင်စု Shirakawago မြေပုံ [map address="Shirakawago" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87sF8bpA ="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Gokayama (Toyama Prefecture) Gokayama၊ Toyama စီရင်စု Gokayama၊ Toyama စီရင်စုမြေပုံ Gokayama ၏ [မြေပုံလိပ်စာ="Gokayama" width="3%" height="4px" api="AIzaSyDvB8bpqAqs_d100wlvYARF500obRvaO87PEN8" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" " draggable="true" controls="true"] မီယာမ (ကျိုတိုစီရင်စု) မီယာမ၊ ကျိုတိုစီရင်စု မီယာမ၊ ကျိုတိုစီရင်စု မီယာမ [မြေပုံလိပ်စာ="မီယာမ၊ ကျိုတို" width="8%" height="3px" api= "AIzaSyDvB4bpqAqs_d8wlvYARF100obRvaO500PEN87" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Ouchi-juku (ဖူ kushima စီရင်စု) Ouchi-juku၊ Fukushima စီရင်စု Ouchi-juku၊ Fukushima စီရင်စု Ouchi-juku ၏ မြေပုံ [မြေပုံလိပ်စာ="Ouchijuku, Fukushima" width="8%" height="3px" api="AIzaSyDvB4bpqAqs_d8crev" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="100" draggable="true" controls="true"] နှင်းတွေထူထပ်တဲ့ရွာတွေကို လည်ပတ်တဲ့အခါ ဘာဝတ်ရမလဲ အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသည့် ဖူဂျီတောင်သို့ ပြန်သွားရန် ဆက်စပ်ပို့စ်များ- ဓာတ်ပုံများ- နှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသည့် ဖူဂျီတောင် 500 ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံး နှင်းကျသည့်နေရာများ- Shirakawago၊ Jigokudani၊ Niseko၊ Sapporo နှင်းပွဲတော်... ဓာတ်ပုံများ- ဂျပန်ရှိ K-cars ဓာတ်ပုံများ- Sakura- ချယ်ရီပွင့်များ ဂျပန်ဓာတ်ပုံများ- The Miharu Takizakura - ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံး ချယ်ရီပင်။ ဓာတ်ပုံများ- San'in - ခေတ်ဟောင်းဂျပန်ကျန်ရှိနေသည့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပြည်။ ဓာတ်ပုံများ- Nara - ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရှေးဟောင်းမြို့တော် ဂျပန်မှကြိုဆိုပါတယ်။ လှပသောဓာတ်ပုံ 87 ကိုခံစားပါ။ ဓာတ်ပုံများ- Kamikochi ၏လေးရာသီဓာတ်ပုံများ- တိုကျိုပင်လယ်အော်ရှိ Odaiba ဓာတ်ပုံများ- Hakodate ဓာတ်ပုံများ- Ise Jingu Shrine ...
နွေရာသီတွင် ဟော့ကိုင်းဒိုးတွင် အကျော်ကြားဆုံး ခရီးသွားနေရာများမှာ Biei နှင့် Furano တို့ဖြစ်သည်။ ဟော့ကိုင်းဒိုး၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသော အဆိုပါနေရာများသည် ကြမ်းတမ်းသောလွင်ပြင်များရှိသည်။ အဲဒီမှာ ရောင်စုံပန်းတွေ ပွင့်တယ်။ ဤလွင်ပြင်ပေါ်တွင် သဘာဝ၏ပြောင်းလဲမှုကို မြင်လျှင် သင့်စိတ်ကို ကုစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Biei နဲ့ Furano အတွက်တော့ ဆောင်းပါးအချို့ရေးပြီးပါပြီ။ သို့သော်လည်း နွေရာသီ မြက်ခင်းပြင်၏ အလှကို ထပ်မံ၍ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ဓာတ်ပုံအင်္ဂါရပ်ကို ဤနေရာတွင် အကျဉ်းချုပ် ပြောပြပါမည်။ Biei နှင့် Furano အကြောင်း အောက်ပါဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုပါ။ Biei၊ Hokkaido၊ Japan တွင်ရှိသော နွေရာသီနေထွက်ချိန်၌ လှပသောကမ္ဘာ = Adobestock လှပသောပန်းခင်းများ Biei၊ Hokkaido ရှိ ရောင်စုံတောင်ကုန်း၊ ဂျပန် = Hokkaido ရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး လှပသော Panoramic Flower Gardens Shikisai-no-oka Shutterstock အာဖရိက Marigold, Salvia သည် သက်တံမျဉ်းများပွင့်လန်းနေပါသည်။ ၊ ဂျပန် = Shutterstock Lavendar၊ Sunrise Park ၏ နီမြန်းသော ပန်းပွင့်များ၊ Furano၊ Hokkaido၊ Japan = Tomita Farm ရှိ Lavender Field တွင် Shutterstock အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ Furano၊ Hokkaido၊ Japan = Shutterstock အတွင်းရှိ အခြားသော ရှုခင်းကောင်းများ Biei နှင့် Furano ရှိ Biei ၏ လှပသော တောင်ကုန်းတစ်ခု- cho၊ Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary သစ်ပင်၊ Biei-cho၊ Hokkaido Japan = Hokusei no Oka Tenbo Park ရှိ Shutterstock နေကြာပန်းပွင့်၊ Hokkaido၊ Japan = Bieishirogane မြို့၏ Shutterstock အပြာရောင်ရေကန် = bieishirogane မြို့၏ Shutterstock အပြာရောင်ကန် = bieishirogane မြို့ = ဟော့ကိုင်းဒိုးညနေခင်းရှုခင်းရှိ AdobeStock ညနေခင်း။ Biei Hokkaido၊ Japan = Biei၊ Hokkaido ရှိ Shutterstock နေဝင်ချိန်၊ ဂျပန် = Shutterstock Biei၊ Hokkaido ရှိ လှပသောနေဝင်ချိန်၊ ဂျပန် = Shutterstock Maps Biei [မြေပုံလိပ်စာ="Biei, Hokkaido" width="100%" height="300px" api=" AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Furano [map address="Furano" Hok .။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဂေရှားယဉ်ကျေးမှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Geisha သည် ဂျပန်အကများနှင့် သီချင်းများဖြင့် ၎င်းတို့၏ဧည့်သည်များကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဖျော်ဖြေပေးသော အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ Geisha သည် Edo ခေတ်တွင်ရှိခဲ့သော ရည်မွန်သော "Oiran" နှင့် လုံးဝကွဲပြားသည်။ ကျိုတိုတွင် ဂေရှားကို ဂီဂီဟုခေါ်သည်။ အလုပ်သင်လူငယ် geisha ကို "maiko" ဟုခေါ်သည်။ မကြာသေးမီက ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီးများသည် ဂေရှားဖြစ်လာနိုင်သည်။ အရင်တုန်းကတော့ geisha ကို အကြိမ်ကြိမ် အင်တာဗျူးခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့သည် အလွန်ဥာဏ်ပညာနှင့် သိမ်မွေ့သော အမူအကျင့်များကို သင်ယူခဲ့ကြပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၏ အဖိုးတန်သော ဆက်ခံသူများဖြစ်သည်။ ကျိုတိုတွင်၊ နွေဦးနှင့် ဆောင်းဦးတွင် ပွဲများကို သင် geisha အကကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့် ပွဲများကျင်းပသည်။ Geisha သည် ဇူလိုင်လတွင် Gion Festival တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Geisha ယဉ်ကျေးမှုကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ Gion ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock ဓာတ်ပုံများ Gion = Shutterstock မြေပုံ၏ Gion [မြေပုံလိပ်စာ="Gion၊ Kyoto" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12 " draggable="true" controls="true"] အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သို့ "Best of Kyoto" ဆက်စပ်ပို့စ်များ- ဓာတ်ပုံများ- ကျိုတို ဧကရာဇ်နန်းတော် (ကျိုတိုဂိုဆို) ဓာတ်ပုံများ- နွေရာသီတွင် ရိုးရာကျိုတိုဓာတ်ပုံများ- ကျိုတိုရှိ Kodaiji ဘုရားကျောင်း ဓာတ်ပုံများ- ကျိုတိုရှိ ချယ်ရီပန်းများ ဓာတ်ပုံများ- ကျိုတိုရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း ဓာတ်ပုံများ- ကျိုတိုရှိ Kamogawa မြစ် ဓာတ်ပုံများ- ကျိုတိုရှိ Nanzenji ဘုရားကျောင်း ဓာတ်ပုံများ : ကျိုတိုရှိ Jidai Matsuri ပွဲတော် ဓာတ်ပုံများ ၊ Arashiyama ရှိ အံ့ဖွယ်အလင်းရောင် “Hanatouro”၊ ကျိုတို ဓာတ်ပုံများ- ...
Kinkakuji သို့မဟုတ် Ginkakuji ဘယ်ဟာ ပိုကြိုက်လဲ။ ဒီစာမျက်နှာမှာ ကျိုတိုကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီဘုရားကျောင်းနှစ်ခုရဲ့ လှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Kinkakuji နှင့် Ginkakuji အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ။ ဂျပန်၊ ကျိုတိုရှိ ကင်ကာကူဂျီ Ginkakuji Ginkakuji ဘုရားကျောင်း ဓာတ်ပုံများ = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kinkakuji ဘုရားကျောင်း၊ ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Ginkakuji ဘုရားကျောင်း၊ ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Ginkakuji ဘုရားကျောင်း = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kinkakuji ဘုရားကျောင်း၊ ဂျပန် = Shutterstock Kyonkakuji ဘုရားကျောင်း၊ ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kinkakuji ဘုရားကျောင်း၊ ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Ginkakuji ဘုရားကျောင်း၊ ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ AdobeStock Kinkakuji ဘုရားကျောင်း = Kinkakuji ၏ Shutterstock မြေပုံ [map address="Kinkakuji" width="100%" height="300px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true"] Ginkakuji မြေပုံ [မြေပုံလိပ်စာ" width="Ginkakuji" = "100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true" ] အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သို့ "Best of Kyoto"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kodaiji ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိသမိုင်းဝင်တောင်ကုန်းလမ်းများ - စနိုင်း - ဇကာ၊ နိနီ - ဇကာစ။ ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင် Jidai Matsuri ပွဲတော်။ ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ချယ်ရီပန်းများပွင့်များဓာတ်ပုံများ: ကျိုတို Imperial နန်းတော် (ကျိုတို) Gosho) ဓာတ်ပုံများ - ဆောင်းရာသီတွင် Kifune, Kurama, Ohara - ကျိုတိုကျိုကျိုတိုမြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။ အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ - Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံများ: Nara - ဂျပန်၏မြို့တော်၏ရှေးဟောင်းဓာတ်ပုံများ - Geion (Maiko & Geigi) Gion, ကျိုတိုဓာတ်ပုံများ - နွေရာသီတွင်ရိုးရာကျိုတိုဓာတ်ပုံများ - ဂျပန်ရှိနှင်းဖုံးနေသောရွာများဓာတ်ပုံများ - Koyasan
ဟော့ကိုင်းဒိုးတောင်ပိုင်းရှိ Hakodate သည် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ ဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသည်။ Hakodate သည် ဤအချိန်တွင် တကယ်ကို လှပပါသည်။ Asaichi ဟုခေါ်သော စျေးရှိ ပင်လယ်စာထမင်းပန်းကန်သည်လည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Hakodate သို့ virtual ခရီးစဉ်ကို သွားကြပါစို့။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပါ။ Hakodate တောင်ပေါ်မှညမြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ Hakodate တောင်ပေါ်မှ Shutterstock ဆောင်းရာသီရှုခင်းများ = Hakodate ဆိပ်ကမ်းမှမြင်ရသော Shutterstock Mt. Hakodate = Shutterstock Motomachi ကုန်းစောင်းမှမြင်ရသော Hakodate မြို့ = Hakodate တွင်ပြေးဆွဲနေသော Shutterstock City ရထားရထားမြို့ = Shutterstock Hakodate မြို့တွင်း ဆောင်းရာသီ Kanemori Aka Renga Soko in Hakodate = Shutterstock Hokodate မနက်ခင်းဈေး Hakodate ဘူတာအနီးရှိ Hakodate နံနက်ခင်းဈေးရှိ ပင်လယ်စာပန်းကန်လုံး = Shutterstock လှပစွာတောက်ပနေသော Goryokaku = Shutterstock လှပစွာတောက်ပနေသော Goryokaku = Shutterstock သည် Hakodate ၏ဆင်ခြေဖုံးများတွင် လှပသော Mount Komagatake ရှိပါသည် Shutter Shutter You can enjoy Hakodate မြို့ဆင်ခြေဖုံးရှိ Onuma Park တွင် နှင်းလျှောစီးခြင်းနှင့် နှင်းလျှောစီးခြင်း = Hakodate ၏ Shutterstock မြေပုံ [map address="Hokodate" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" class theme="ddiscreet" -border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] ဖတ်ရှုခြင်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဆုံး။ ဆက်စပ်ပို့စ်များ- Hakodate! ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံး7ဓာတ်ပုံများ- နွေရာသီတွင် Biei နှင့် Furano ဓာတ်ပုံများ- ဟော့ကိုင်းဒိုးရှိ Tauhubetsu တံတား ဓာတ်ပုံများ- ဟော့ကိုင်းဒိုးရှိ Tomamu ဓာတ်ပုံများ- ဟော့ကိုင်းဒိုးရှိ မြင်းများ ဓာတ်ပုံများ- Tokachi၊ Hokkaido ရှိ လှပသော သစ်တောများ ဓာတ်ပုံများ- Noboribetsu Onsen -Hokkaido ၏ အကြီးဆုံး ရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်း ဓာတ်ပုံများ : Yokohama Photos : Koyasan ဓာတ်ပုံများ : ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နှင်းဖုံးရွာများ Photos : Okinawa ၏ လှပသော ...
ရထားပေါ်က သာယာလှပတဲ့ ဂျပန်ကျေးလက်ရှုခင်းတွေကို ခံစားချင်ရင် အနောက်ဖူကူရှီးမားစီရင်စုမှာရှိတဲ့ JR Tadami လိုင်းကို အကြံပြုချင်ပါတယ်။ Tadami လိုင်းသည် တောင်များကိုဖြတ်၍ ဂျပန်၏ဆာမူရိုင်းယဉ်ကျေးမှုကို သင်ခံစားနိုင်သည့် ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်သည့် Aizu-Wakamatsu မှ ပြေးဆွဲသည်။ Fukushima စီရင်စုရှိ Tadami Line JR Tadami Line = Fukushima စီရင်စုရှိ Shutterstock JR Tadami Line = Fukushima စီရင်စုရှိ Shutterstock JR Tadami Line = Fukushima စီရင်စုရှိ Shutterstock JR Tadami Line = Fukushima Prefecture ရှိ Shutterstock JR Tadami Line = Fukushima Prefecture ရှိ Shutterstock JR Tadami Line = Fukushima စီရင်စုရှိ Pixta JR Tadami Line = Fukushima စီရင်စုရှိ Shutterstock JR Tadami လိုင်း = Fukushima စီရင်စုရှိ Pixta JR Tadami Line = Aizu-Wakamatsu ၏ Shutterstock မြေပုံ [map address="Aizu-Wakamatsu" width="100%" height="300px " api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="7" draggable="true" controls="true"] အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ . နောက်သို့ "Best of Fukushima"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Ouchijuku ကျေးရွာဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Hanamiyama ဥယျာဉ်ဖူကူရှီးမားစီရင်စု၏အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ - Miharu Takizakura - ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးချယ်ရီပင်။ ဓာတ်ပုံများ - Mie စီရင်စုရှိ Ise Jingu ဘုန်းကြီးကျောင်းများဓာတ်ပုံများ: Ishikawa စီရင်စုရှိ Kanazawa ဓာတ်ပုံများ - Yamaguchi စီရင်စုရှိ Motonosumi ဘုန်းတော်ကြီးဓါတ်ပုံများ - Nagasaki စီရင်စုရှိ Gunkanjima ကျွန်းဓါတ်ပုံများ - Nagano စီရင်စုရှိ Togakushi ဘုန်းကြီးကျောင်းဓာတ်ပုံများ - Shiga စီရင်စုရှိ Biwako ချိုင့်ဓာတ်ပုံများ - Miyagaki စီရင်စုရှိ Takachiho ဓာတ်ပုံများ - ဂျပန်နိုင်ငံရှိနှင်းဖုံးနေသောရွာများ
Kyushu ၏အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော Beppu သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ Beppu ကို သင်သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါ ဒီနေရာနဲ့ အဲဒီနေရာမှာ ပေါက်နေတဲ့ ရေပူစမ်းတွေကို အရင်ဆုံး အံ့သြမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာမျက်နှာမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Beppu မြို့ရဲ့ရှုခင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ အငွေ့တွေတက်လာတယ်။ သူတို့သည် မီးမလောင်ပါ။ ညဘက်တွင် ဤအငွေ့များသည် တောက်ပပြီး လှပနေပါသည်။ Beppu ၏ Beppu မြေပုံ၏ဓာတ်ပုံများ [map address="Beppu, Oita" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map-dp-map-map ဗဟိုပြု" zoom="9" draggable="true" controls="true"] အဆုံးထိ ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြားဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။ "Best of Beppu" သို့ ပြန်သွားရန် ကျွန်ုပ်အကြောင်း Bon KUROSAWA ကျွန်ုပ်သည် Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) အတွက် အကြီးတန်းတည်းဖြတ်သူအဖြစ် နှစ်ရှည်လများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် လွတ်လပ်သော ဝဘ်စာရေးဆရာအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ NIKKEI တွင် ကျွန်ုပ်သည် ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု မီဒီယာ၏ အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပျော်စရာကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ဤဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပါ။ ဆက်စပ်ပို့စ်များ- ဓာတ်ပုံများ- Beppu (4) ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရေပူစမ်းများကို ခံစားလိုက်ပါ။ Beppu! ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်းတွင် ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံများ- Beppu (3) Hells (Jigoku) အမျိုးမျိုးကို သွားလည်ကြရအောင်) ဓာတ်ပုံများ- Beppu (2) ရာသီလေးခု၏ လှပသောပြောင်းလဲမှုများ ဓာတ်ပုံများ- Noboribetsu Onsen -Hokkaido ၏ အကြီးဆုံးရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်း Shining Spring and Distant Snow Scene- လှပသော ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံထဲမှ ဓာတ်ပုံများ။ : Hakone တိုကျိုအနီးရှိ ရေပူစမ်းဧရိယာ ဓာတ်ပုံများ : Hokkaido ရှိ Niseko Ski Resort တွင် ဆောင်းရာသီ - နှင်းမှုန်များကို ခံစားကြည့်ပါ Photos : Kinosaki Onsen - လူကြိုက်များသော ရိုးရာပူပူ...
ဂျပန်မှာ အလှပဆုံး ချယ်ရီပန်းက ဘာလဲလို့ မေးရင် ဖူကူရှီးမားစီရင်စုက Miharu Takizakura လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Miharu Takizakura အပင်က နှစ်ပေါင်း 1000 ကျော် သက်တမ်းရှိပါပြီ။ ဤလှပသော ချယ်ရီပင်ကို ဒေသခံများက ကာလကြာရှည်စွာ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်း ချစ်ခင်ခဲ့ကြသည်။ Miharu Takizakura ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ virtual ခရီးတစ်ခုသွားလိုက်ရအောင်။ Miharu Takizakura ၏ဓာတ်ပုံများ Fukushima စီရင်စုရှိ Miharu Takizakura = Shutterstock The Miharu Takizakura Fukushima စီရင်စုရှိ Miharu Takizakura = Shutterstock The Miharu Takizakura ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Miharu Takizakura = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Miharu Takizakura in Shutterstock The Mihaizakura စီရင်စု = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima စီရင်စု = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima စီရင်စု = Shutterstock The Miharu Takizakura Fukushima စီရင်စု = Shutterstock The Miharu Takizakura = Fukushima စီရင်စုရှိ Miharu Takizakura = Takizma ၏ Shutterstock မြေပုံ The Mihafectakurakushima " width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" ထိန်းချုပ်မှုများ= "အမှန်"] အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သို့ "Best of Fukushima" ဆက်စပ်ပို့စ်များ- ဓာတ်ပုံများ- ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Hanamiyama ပန်းခြံ ဓာတ်ပုံများ- 11 ဂျပန်ချယ်ရီပန်းများ အပြည့်အဝခံစားရန် သော့ချက်စာလုံးများ ဓာတ်ပုံများ- ဂျပန်ရှိ နှင်းဖုံးရွာများ ဓာတ်ပုံများ- တောင် Yoshino - နွေဦးတွင် ချယ်ရီပင် 30,000 ပွင့်သည်! Photos: Koyasan Photos: Ise Jingu Shrine Mie စီရင်စုရှိ ဓာတ်ပုံများ- Ishikawa စီရင်စုရှိ Kanazawa ဓာတ်ပုံများ- San'in - ခေတ်မီဂျပန်ကျန်ရှိနေသည့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပြည်တစ်ခု ဓာတ်ပုံများ- Shiga စီရင်စုရှိ Biwako တောင်ကြား ဓာတ်ပုံများ- Shogawa Gorge အပျော်စီးသင်္ဘော -River ...
Takachiho သည် ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီများ၏ ဇာတိအဖြစ် လူသိများသော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော နယ်မြေဖြစ်သည်။ Kyushu အရှေ့ဘက်ရှိ Miyazaki စီရင်စု၏ တောင်တန်းဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ မြို့သည် ဒဏ္ဍာရီလာ အပြောအဆိုများနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသော Kagura အကများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ဆောင်းဦးရာသီမှာ လှပတဲ့ တိမ်ပင်လယ်တွေကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီမြို့ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး ခရီးသွားနေရာကတော့ Takachiho Gorge ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများစွာဖြင့် Takachiho သို့ virtual ခရီးထွက်ကြပါစို့။ မီယာဂါကီစီရင်စုရှိ Takachiho Takachiho ၏ဓာတ်ပုံများ = Miyagaki စီရင်စုရှိ Shutterstock Takachiho = Miyagaki စီရင်စုရှိ ADobeStock Takachiho in Miyagaki Prefecture Takachiho = Miyagaki Prefecture in Takachiho = Shutterstock Takachiho in Miyagaki Prefecture Takachiho in Takachio Miyagaki Mifecture Shutterstock Takachiho ၏ Miyagaki စီရင်စုရှိ မြေပုံ [map address="Takachiho, Miyazaki Prefecture" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="-dp-aplight-border -centered" zoom="9" draggable="true" controls="true"] အဆုံးထိ ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "အကောင်းဆုံး Miyazaki" သို့ ပြန်သွားရန် ဆက်စပ်ပို့စ်များ- ဓာတ်ပုံများ- Gunma စီရင်စုရှိ Oze ဓာတ်ပုံများ- Shiga စီရင်စုရှိ Biwako Valley ဓာတ်ပုံများ- Ishikawa စီရင်စု Kanazawa ဓာတ်ပုံများ- Fukushima စီရင်စုရှိ Hanamiyama Park ဓာတ်ပုံများ- Mie စီရင်စုရှိ Ise Jingu Shrine ဓာတ်ပုံများ- Nagasaki ရှိ Gunkanjima ကျွန်း စီရင်စုဓာတ်ပုံများ- Nagano စီရင်စုရှိ Togakushi Shrine ဓာတ်ပုံများ- Yamaguchi စီရင်စုရှိ Motonosumi Shrine ဓာတ်ပုံများ- Fukushima စီရင်စုရှိ Tadami Line ဓာတ်ပုံများ- Okinawa စီရင်စုရှိ Shuri ရဲတိုက် ဓာတ်ပုံများ- Shimane စီရင်စုရှိ Matsue ဓာတ်ပုံများ- Shiga စီရင်စုရှိ Hikone ရဲတိုက်
အားလုံးရာသီ ဆောင်းရာသီ (52) ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) နွေ ဦး (၄၇) မေလ (၁၃) မတ်လ (၁၂) ပြီလ (၁၇) နွေရာသီ (37) ဇွန် (၁၂) ဇူလိုင်လ (၁၆) သြဂုတ်လ (၁၅) ဆောင်း ဦး (၄၇) စက်တင်ဘာ (၁၆) အောက်တိုဘာ (16) နိုဝင်ဘာ (၁၇)
အားလုံး Tags: အဘရှီရ (1) Aizu-Wakamatsu (2) Akihabara (4) Aomori (3) Arashiyama (4) Asahiyama တိရစ္ဆာန်ရုံ (1) Asakusa (3) Ashikaga ပန်းခြံ (3) Aso (5) ဘепပူ (6) Biei (19) ချူဆန်ဂျီဘုရားကျောင်း (၃) Daisetsuzan (5) Dotonbori (1) အီဒိုတိုကျိုပြတိုက် (၂) Eikando Zenrinji ဘုရားကျောင်း (4) osh နော့ရှီမာ (3) ဖူဂျီ -Q Highland (2) ဖူကူကို (3) Furano (17) Fushimi Inari-taisha ဘုန်းကြီးကျောင်း (4) Ginza (3) Ginzan Onsen (4) Gion (1) Hakodate (16) Hakone (4) Hakone လေပြင်ပြတိုက် (၁) Hakuba (6) ဟာဆီစာဘုရားကျောင်း (1) ဟီဂျီရဲတိုက် (4) ဟီရိုရှီးမားငြိမ်းချမ်းရေးသတိရအောက်မေ့ပွဲပြတိုက် (၄) Hitachi ပင်လယ်ကမ်းခြေပန်းခြံ (4) Huis Ten Bosch (၁) Palaceကရာဇ်နန်းတော် (2) အိဇ် Grand Shrine (2) အိဇ်ဘုန်းတော်ကြီး (၁) Izumo Taisha (5) Jigokudani နှင်းမျောက်ဥယျာဉ် (3) Kaiyukan (1) ကကူနိုဒတ် (5) Kamakura (6) Kamikochi (5) ကာနဇာဝါ (5) Kenrokuen ဥယျာဉ် (6) ကင်ကာကူဂျီဘုရားကျောင်း (4) Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း (7) ကိုဘေး (3) Koyasan (4) Kumamoto ရဲတိုက် (2) Kumano ကိုဒို (4) ကန်ဘောဂူချီကို (၂) Matsumoto ရဲတိုက် (4) မေဂျီဂျင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း (၄) Miyajima (10) တောင် ဖူဂျီ (13) တောင် တakao (3) တောင် Yoshino (4) Nabana no Sato (3) Nagasaki (3) နရာပန်းခြံ (4) နီကိုက (1) Nikko Tosho-gu (4) နီစီကို (7) Odaiba (2) Oirase စီး (3) အိုကီနာဝါ (9) အိုဆာကာရဲတိုက် (3) အိုတာရူ (14) အိုး (4) Sakurajima ကျွန်း (2) Sapporo (22) တင်ဒါ (3) Sensoji ဘုရားကျောင်း (3) Shibuya (2) ရှင်ဂျုကု (4) Shinjuku Gyoen ဥယျာဉ် (၂) Shirakawago (9) Shiretoko (14) Takachiho Gorge (3) Takayama (4) တတီယာမာကူဘို Alpine လမ်းကြောင်း (၆) Todaiji ဘုရားကျောင်း (4) တိုကျိုဒစ္စနေး (1) တိုကျိုအမျိုးသားပြတိုက် (၂) တိုကျိုမိုးမျှော်တိုက် (3) တိုကျိုတာဝါ (3) Ueno (1) ဥမီဒါ (1) USJ (3) Yakushima (2) Yokohama (2) Yufuin (3) ဇို (5)
မူပိုင်ခွင့်© Best of Japan , 2022, All Rights Reserved ။